2-Bata Bridge Kicheni Faucet Nedivi Sprayer
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Kicheni Faucets / WOWOW 2-Bata Bridge Kicheni Faucet Ine Side Sprayer
WOWOW 2-Kubata Bridge Kicheni Bheji Faucet Ne Side Sprayer
Yakagadzirwa kubva kubhuronzi yakasimba, ino yakaisvonaka vintage kicheni sokisi fa faipits inosanganisira ceramic disk cartridge system iyo inopiwa mu 4 yakasimba mapete.
Uyezve, ine yakakodzera yendarira parutivi sprayer yekuwedzera yekuchenesa simba uye mukana. Yayo daring lever inobata uye inogeza geometry inopa yekupedzisira kubata kune isingagumi kicheni kicheni faucet.
Brass mukicheni faucet 23115A1
Iyo yekirasi yemhangura yekicheni kiyi faucet yeWOWOW inoratidzira kicheni yako dhizaini nechitarisiko chevintage. Iyo inonyatso kuwedzera kuwedzera kunoshamisa kubata kune yako kicheni décor. WOWOW inozivikanwa pasi rese nekushinga kwayo dhizaini. Vagadziri veWOWOW vanoita mutsauko mumusika. Unobva waona izvi paunoona magadzirirwo eiyi inokosha ndarira kicheni faucet. Magadzirirwo eWOWOW anozvisiyanisa nechero rimwe gadzira, seWOWOW inoziva senge isingaiti iyo faikitini yekicheni inowedzera chimwe chinhu chakakosha kune chero kicheni décor. Zvese zvekubheka zvekicheni zveWOWOW zvinogona kuuya zvakananga kubva kune chero magazini yakasarudzika nezvekugadzirwa kwounyanzvi uye hwoumbozha hwekicheni.
Iyi ndarira yekicheni kepe faucet yeWOWOW inoratidzira yakasarudzika dhizaini dhizaini yayo yakavezwa mabira. Iyo br br nickel yekupedzisa inowedzera kubata kwekunakisa kukicheni yako zvakare. Iyi yakanaka maratidziro uye yekirasi dhizaini inouya zvakabatana pamwechete mune iyi bhiriji tap yemakicheni kicheni kunyura faucet kuunganidzwa kweWOWOW. Kwete pasina chinhu iyi yendarira kicheni faucet inoongwa nevatengi vanobva pasi rese.
Brass kicheni kiyi neparutivi sprayer
Chinhu chinonyanya kushamisa chendarira mukicheni faucet yeWOWOW ndeweparutivi sprayer. Mazhinji fairi yekicheni anopa anosanganisa kudhonza pasi kana kuburitsa kunze spout. Iyi svutugadzike inowanzoiswa mukicheni faucet pachayo. Nekudaro iyi yerutivi sprayer yakarongedzwa zvakasiyana kuti irege kukanganisa maitiro ekushanda zvachose. Chekutanga pane zvese, neiyi inoparadzaniswa dhayeti kunze iwe unokwanisa kuwedzera nzvimbo yako yekushanda zvakanyanya. Inotarisa ne60 inch yemvura hose iyo inogona kuwedzera nzvimbo yako yekushanda ine 30 inches. Izvi zvinonyanya kukosha apo kicheni yako inoshongedzwa neiri mukicheni kunyura. Kechipiri, iwe une chiparadziro chakasiyana chegoridhe kicheni faucet pachako, saka spout imwe neimwe inogona kuita basa rayo rakasiyana nemazvo.
Iyo yekunyorera sprayer inogona kushanda nyore neruoko rumwe chete. Iyo isina tsvina yemvura hose inogona kuburitswa kunze nyore uye inotora otomatiki kunzvimbo yayo yekutanga. Mvura inoyerera inogona kushandurwa nekubaya nyore pane bhatani rekumashure, iro rakarongedzerwa zvakanaka kuseri kwedivi rekudhirowa. Iwe haufanire kugadzira zvakawoma mawairesi kuti uite rwizi rwemvura rwaunoda. Vagadziri veWOWOW zvirokwazvo vakafunga nezve ergonomic dhizaini zvakare, kuitira kuti vakupe iwe yakanakisa ruzivo iwe yaunogona kuwana. Iwe unogona kana kusarudza mvura inopisa kana inotonhora kuti iuye kubva kune ino side sprayer. Vanhu vazhinji vakasarudzira mvura inotonhora, asi mvura inopisa inogona zvakare kuve sarudzo. Kunyanya kana iwe waizoshandisa iyi side sprayer kunyanya kuchenesa semuenzaniso. Inoisa furu yakasimba yekuchenesa nyore mapoto akasviba nemapani.
Kaviri bata mhangura kicheni kicheni faucet
Iyo yendarira kicheni faucet pachayo yakagadzirwa nemairi inobata. Izvi zvinokutendera kuti unyatso kudzora kutonhora uye inopisa mvura inoyerera nyore. Zvibatiso zvinogona kusevenza mushe pasina kunetsekana kana backlash. Iwe unoona kunaka kwemaoko nemaitiro kumashure kwavo pakarepo. Izvi zvakagadzirwa chaizvo nezvigadzirwa zvepamusoro-kirasi. Sezvo iwe paunoshandisa yako kicheni faucets kazhinji, kanenge kakati wandei pazuva, iwe unongoda kuve nechokwadi chekuti chiitiko chako chakanaka.
Pose paunoshandisa faucet yako yekicheni. Zvinogona kuvhiringidza kwazvo kutsamwiswa nekuita kwefekitini yekicheni zuva rega rega, kakawanda pazuva. Kungodzokorora kuyeuka kuti iwe wakasarudza zvisarudzo kusarudza kicheni kicheni chako. NeWOWOW zvirokwazvo iwe uchayeuchidzwa nezve sarudzo yakanaka yawakaita. Iyi chiitiko haina kupokana, uye tine chokwadi inotevera nguva yauchasarudza yeWOWOW zvakare.
Yakakwirira-yemhando yemhangura kicheni faucet
Iyo ndarira yekicheni kiyi neparutivi sprayer yakagadzirwa nendarira yakasimba kuti iwone zvese kunaka uye kusimba. Zvakare yakakwira yepamusoro yekupedza mhando inovimbisa kuti kicheni kicheni rako rinogona kuramba kutambisa kana kudzora. Izvo zvinogona kunge zviri marara iwe paunosarudza faucet yekicheni iyo isingazove nemhando dzakaenzana. WOWOW inopfuura kupfuura ese maindasitiri zviyero uye outperforms angangoita chero A-mhando.
Kunze kwezvo iro ndarira yekicheni kicheni inogadzirwa nendarira yakasimba, ino yakaisvonaka vintage kicheni kiyi sink faucets inosanganisirawo yakanakisa ceramic disk cartridge system. Iyi sistimu inovimbisa hupenyu hwese hwepamusoro kuitisa yegoridhe yako kicheni faucet. Unhu hunofanira kunge huri hukuru hweputi yako yekukicheni, sekushayikwa kwemhando kunogona kukonzera kukanganisa uye kutsamwisa. Izvo zvinofanirwa kudzivirirwa nguva dzese, sezvo zvisiri madikanwa kutenga fairits yekicheni yemhando yepamusoro. WOWOW inoratidza kuti iwe waigona kuwana mhando yepamusoro pamutengo unodhura. Kwete pasina chinhu WOWOW inozivikanwa pasi rese kuti ipe yakanakisa mari yemari maererano nekicheni faucets.
Yakanakisa basa revatengi
Wese mutengi weWOWOW anoregererwa kusvika pakakwirira. Haingori chete kuti faucet yekicheni imwe neimwe inouya neketuru yekuisa. Nenzira iyi iwe unogona kuisa yako ndarira kicheni kicheni iwe pachako nyore, pasina kushandisa chero zvimwe zvekushandisa. Fungawo nezvegurovhosi yakasarudzika yekuisa kuti yako chiitiko chekuisa ive yakanakisa. Pamusoro pezvo, WOWOW inobata vatengi vayo samambo, kuitira kuti vadzoke nguva yeupenyu hwavo hwese pavanoda faucet. Kwete pasina chinhu WOWOW ine akawanda anodzoka epasi rese vatengi vakavimbika kune iyi mhando. Izvi zvinowanikwa zvakare neakanakisa basa revatengi.
Kuti udzikise kukosha kwemari yatinokupa iwe, WOWOW haatyi kukupa iwe-yemakore mashanu waranti nguva. Vazhinji vatengesi, kunyangwe iwo ma-ma-brand, vanongopa 5-gore ramwarandi. Kana fekitiri yako yekukicheni ingaputsa mugore repiri, ingangove yako njodzi. Uye iwe waizofanira kutenga nyowani yekicheni kicheni faucet zvakare. KuWOWOW hatisi kuwana ichi zvachose, seyakafanira kicheni faucet inofanira kungogara kwemakore mashanu. Ndokusaka WOWOW ichikupa iyi yekunetseka-isina waranti-nguva yeino isingasviki makore mashanu. WOWOW ndeyekuti inogutsikana neyako yendarira kicheni faucet, kuti inokupa iwe-yezuva-1 yekudzoka sevhisi zvakare. Iwe unodzosera mari yako, kudzorera kuzere, apo iwe waisazofadzwa nekukosha kwemari iyo iwe yaunowana neyegoridhe kicheni faucet yeWOWOW. Iyi mari yekudzosera garandi inoratidza kuvimba kwedu mugoridhe rekicheni kiyi! Zvakanakira iwo ndarira mukicheni faucet muchidimbu:
• Kuparadzanisa dhizaini parutivi sprayer
• Nickel yakashama
• Yakagadzirwa zvemhando yepamusoro mhangura zvemidziyo
SKU: 23115A1 Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Kicheni Faucets Tags: 8 Inch, zambuko, Vintage
WOWOW Matte Black Kicheni Dhiza Anochinja Taps